» एक हप्ता अगाडी जापानबाट हेटौंडा आएका ५ जना के गर्दैछन् अध्यक्ष ज्यू ?
एक हप्ता अगाडी जापानबाट हेटौंडा आएका ५ जना के गर्दैछन् अध्यक्ष ज्यू ?
१३ चैत्र २०७६, बिहीबार ११:२७
मकवानपुर । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस संक्रमणबाट यो समाचार तयार पार्दा समेत २१ हजार बढीको मृत्यु भईसकेको छ । नेपालमा पनि ३ जनामा यो भाइरस देखिएको छ भने १ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
यसरी कोरोना संक्रमण देखिनेमा सबै बाहिरी देशबाट नेपाल फर्केकोमा पाइएको छ । योसँंगै विदेशबाट नेपाल फर्कनेलाई सरकारले आईसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेको छ ।
मकवानपुरमा पनि विदेशबाट नेपाल आउनेमाथी निगरानी राखिरहेको छ । गत मार्च २० तरिका जापानको Narita international airport बाट नेपाल एयरलाइन्स को RA434 बाट काठमाडौ हुँदै हेटौंडा ५ सानोपोखरा आईपुगेको एकै परिवारको एक बच्चासहित ५ जनाको के अवस्था छ कसैलाई जानकारी छैन । सो विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ का वडा अध्यक्ष राजेश बानियाँलाई हामीले सोध्दा आफुलाई जानकारी नभएको बताउँदै तुरुन्तै उनीहरुको अवस्थाबारे बुझ्ने जानकारी दिएका छन् ।
विदेशबाट फर्किएकाहरुमा मात्रै अहिलेसम्म कोरोना भाईरस कोभिड–१९ देखिएकोले सरकारले बाहिरबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने जनाएको छ ।
आफ्नै घरमा छुट्टै कोठा, शैचालयलगायतको व्यवस्थ ागर्न सकिने भए होम वा यी अवस्थाहरु नभए निर्माण गरिएका क्वारेन्टाईनमा राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरुको निगरानीमा राख्ने भनिएको छ ।
तर उक्त परिवारको बारेमा जानकारी नहुँदा त्यसले पनि केही समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले यथाशिघ्र उनीहरुको बारेमा थप जानकारी लिई क्वारेन्टाईनमा चिकित्सकहरुको निगरानीमा राखियोस् ।